आइफोन फाइभ नेपालमा चल्दैन ~ The Nepal Romania
आइफोन फाइभ नेपालमा चल्दैन
7:00 AM बिबिध No comments
एप्पलले आफ्नो बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोनको नयाँ संस्करण आइफोन फाइभ गएराति अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, जापान, हङकङ, सिंगापुरमा असोज ५ गतेदेखि उपलब्ध हुने र बाँकी १०० देशमा यो वर्षको अन्त्यसम्म उपलब्ध हुने बताएको छ। तपाईँ पनि यो फोन किनौँला वा विदेशबाट कसैलाई मगाउँला भन्ने सोचिरहनुभएको छ ? त्यसो हो भने ध्यान दिनुस्, अहिलेको अवस्थामा आइफोन फाइभ नेपालमा चल्दै चल्दैन। आइफोनका कुनै पनि मोडल नेपालमा आधिकारिक रुपमा बिक्री सुरु भएको छैन। आइफोनले विश्वभरका टेलिकम अपरेटरहरुसँग मिली कन्ट्र्याक्टमा यो फोन बेच्ने गर्छ। तर 'सिम अनलक' गरी त्यसलाई नेपालमा पनि चलाउन सकिने बनाइएको छ। आइफोनका पुराना संस्करणहरुमा यो सुविधा उपलब्ध भए पनि आइफोन फाइभ भने सिम कै कारण नेपालमा चल्न सक्दैन। किनभने आइफोन फाइभमा प्रयोग हुने सिम 'नानो सिम' हो। नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएललगायत नेपालका कुनै पनि टेलिकम अपरेटरले 'नानो सिम' वितरण गर्दैनन्।
आइफोनको यसअघिका मोडलमा प्रयोग हुने माइक्रो सिम पनि नेपाली टेलिकम अपरेटरहरुले उत्पादन गरेका छैनन्। नेपाली अपरेटरहरुले रेगुलर सिम मात्रै उत्पादन गर्छन्। तर सिम कटरले काटेर यहाँका प्रयोगकर्ताहरुले रेगुरल सिमलाई नै माइक्रो सिम बनाई त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। नानो सिम पनि त्यसैगरी बनाउन संभव छ त ? छैन । नानो सिम आकारमा मात्र सानो हैन, पातलो पनि हुन्छ। सिम काटेर सानो बनाए पनि पातलो बनाउन सकिँदैन। माइक्रो सिमभन्दा नानो सिम १५ प्रतिशतले पातलो हुन्छ। त्यसैगरी यो माइक्रो सिमभन्दा ४० प्रतिशत सानो हुन्छ। रेगुलर सिमलाई नानो सिम बनाउन नसकिए पनि नानो सिमलाई भने रेगुलर सिम वा माइक्रो सिम बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि एडेप्टर किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए के गर्ने त ? नेपाली टेलिकम अपरेटरहरुले नानो सिम उत्पादन नगरेसम्म पर्खने। अथवा नेपालमा पनि रोमिङ सेवा भएको विदेशी टेलिकम अपरेटरको सिम लिएर यहाँ पनि चलाउने। तर ध्यान राख्नुस्, रोमिङ सेवा निकै महँगो हुन्छ। अर्को एउटा आशा पनि छ, कसैले रेगुलर सिमको मोटाइसमेत घटाउने उपाय निकाल्ने। त्यसो त केही चिनियाँ वेबसाइटमा नानो सिम कटर
उपलब्ध भएको विज्ञापन पनि राख्न सुरु भएको छ। तर चिनियाँ टेलिकम अपरेटरहरुले नै काटेर नानो सिम बनाउन नसकिने बताइसकेको छ। किन एप्पलले आफ्नो उत्पादनमा नानो सिम प्रयोग गर्‍यो त ? यसका दुई कारण छन्। एउटा त उसले आइफोन फाइभलाई पातलो बनाएको छ। फोर एसभन्दा १८ प्रतिशत पातलो छ यो। पातलो बनाउनका लागि सिम राख्ने ठाउँ पनि पातलो बनाएको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को कारण सिम अनलकबाट बच्न खोज्नु हो। माइक्रो सिम प्रयोग गर्ने पहिलो मोबाइल कम्पनी एप्पल नै थियो। तर चिप्ससहितको गिभे सिम राखेर त्यसलाई अनलक गर्न सकिन्थ्यो। नानो सिममा भने चिप्स राख्ने ठाउँसमेत हुन्न। त्यसैले सिम अनलक गर्न नसक्ने बनाउनु एप्पलको उद्देश्य भएको एबसिन्थे जेलब्रेकवालाहरु बताउँछन्।
के छ आइफोन फाइभमा ?
नयाँ आई फोन यसअघिको मोडलभन्दा अझ पातलो र अझ हलुका र अझ छिटो हुनेछ। यो ७.६ मिमि पातलो हुनेछ। फोरएस मोडलभन्दा यो १८ प्रतिशत कम हो। त्यसैगरी यसको वजन ११२ ग्राम छ, जुन पुरानो मोडलभन्दा २० प्रतिशत हलुका हो।
आइ फोन फाइभ शिशा र आल्मुनियमको प्रयोग गरी बनाइएको छ। एप्पलको ए६ चिप्स प्रयोग गरिएकोले यसको सीपीयु दुई गुणा छिटो हुने कम्पनीको दावी छ। वाइफाइ चलाउँदा यसको ब्याट्रीले १० घण्टासम्म धान्ने एप्पलले बताएको छ। यसबाट खिचिने प्यानोरेमिक फोटो २८ मेगापिक्सेलको हुनेछ। अगाडि, पछाडि र मुनि गरी यसमा तीन वटा बिल्ट इन माइक हुनेछ। यसको प्रि अर्डर शुक्रबारबाटै सुरु हुने र एक सातापछि सेप्टेम्बर २१ देखि किन्नेलाई पठाउन थालिने एप्पलले बताएको छ। आई फोन फोर एसकै मूल्यमा फाइभ पनि बेचिनेछ। एप्पलले आई फोन फोरलाई भने कन्ट्रयाक्ट फ्रिमा बेच्ने घोषणा गरेको छ।
यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले आबज निकालेमा पुरुषलाई बढ...
Chapali Height-चपली हाइट-Nepali Full Movie
नेपाली महिलाहरू सेक्समा रमाउन नसक्नुको कारण हरु
महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ?
Full Nepali Movie - Ma Timro Bhaisake [HD]
गर्भवती भइन सकिरा
रेखा शाह र भुपेन्द्र खड्कालाई जबानी चडेपछि …
तपाईं छोरा चाहनु हुन्छ कि छोरी ?? आफ्नो इच्छा अनुस...
तीजमा यसरी नाँचे महिला सेलिब्रेटी (फोटो फिचर)
‘आईफोन ५’, के छ खास नयाँ ? (फोटो फिचरसहित)
मायाले ओमानमा प्लेनभित्रै बच्चा जन्माइन
अविवाहित नायिकाको नजरमा राजेश हमाल
बजारमा नआउँदै आइफोन -५ विवादमा : सामसुङ र एचटीसीले...
नेपालमा पनि नायिकाहरु छन् र !
यौन सम्पर्क (सम्भोग)का बेला महिलाले ध्यान पूराउनुप...
निखिलसँग ऋचाको मस्ती (फोटो सहित )
उसँग मेरो ‘ओरल यौन सम्पर्क ’ भएको थियो: मोडल स्मित...
फेसबुक तर 'लाइक' बटन छैन
अब स्मार्ट घडी- नाडी घडी मै फेसबुक र ट्विटर !
मन्त्री टोप वहादुर रायमाझीकी पत्नीको सेक्स चर्तिकल...
रेखाले किन गरिन् प्रचण्डसंग गोप्य भेटघाट..
अब ह्याकिङबाट छुटकारा !?
I am Sorry-आइ एम सरी-Nepali Full Movie-
एउटा मोबाइलबाट अर्कोमा कसरी सार्ने नम्बर ?